ပြောင်းဖူးအခွံစက် သောပြောင်းဖူး Peeling များအတွက်မြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာစက်၏စိတ်ကူးသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အိမ်သူအိမ်သားကိုင်၏ဝယ်လိုအားဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်,မိသားစုအသုံးပြုမှု,သို့မဟုတ်သေးငယ်သည်,အလယ်အလတ်လယ်ယာအသုံးပြုမှု. လူများသည်အလုပ်သမားများနှင့်အချိန်ကိုလျှော့ချပေးသောရှေးလက်ဟောင်းလက်ကိုင်စက်အစားပြောင်းဖူးကိုပြုလုပ်ရန်ဒီစိတ်ကူးစက်အသစ်ကိုအသုံးပြုကြသည်, ပြောင်းဖူးကိုအချိန်မဖြည့်ခြင်းကြောင့်ပြောင်းဖူးပုပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုပေးသည်. ပြောင်းဖူးခွံသုံးကိရိယာများသည်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူစွာပြုပြင်နိုင်သည်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လည်းနည်းပါတယ်. ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်လျှပ်စစ်မော်တာကိုသုံးနိုင်သည်, ဒီဇယ်အင်ဂျင်, သို့မဟုတ်ပါဝါအဖြစ်လယ်ယာလယ်ထွန်စက်.
အခွံယန္တရားသည်ထိရောက်မှုမြင့်မားရုံမျှသာမဟုတ်ပါ,ဒါပေမယ့်လည်းပြောင်းဖူးကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ,အသားရေနှင့်ပြောင်းဖူးအညစ်အကြေးများ, သငျသညျလောင်စာချက်ပြုတ်ဘို့လုံးလေးများသို့သူတို့ကိုငါပြန်သုံးရန် pellet ကြိတ်ကိုသုံးနိုင်သည်,သို့မဟုတ်ပူနွေးသောလောင်စာ, သင်ဤသည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ကြဘူး?